Wafdi hordhac u ah Madaxweynaha Jabuuti oo lagu soo dhoweeyay Magaalada Muqdisho - Goobjooge.net: Somali News, Somalia news Analysis. Wafdi hordhac u ah Madaxweynaha Jabuuti oo lagu soo dhoweeyay Magaalada Muqdisho - Goobjooge.net: Somali News, Somalia news Analysis.
Wafdi hordhac u ah Madaxweynaha Jabuuti oo lagu soo dhoweeyay Magaalada Muqdisho
Wafdi ka socda dowladda Jabuuti ayaa maanta soo gaaray Magaalada Muqdisho, iyagoo hordhac u ah madaxweynaha dalkaasi oo ka qeyb galaya caleemo saarka madaxweynaha cusub ee Soomaaliya.
Wafdiga dowladda Jabuuti waxaa garoonka diyaaradaha kusoo dhoweeyay wasiiro, xildhibaanno iyo mas’uuliyiin ka tiran Wasaaradda Arrimaha dibadda Soomaaliya.
Waa wafdigii ugu horeeyay ee dalka u yimaada caleemo-saarka madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo Muqdisho ka dhaceysa 9-ka June2022.
Madaxda dalalka Jabuuti, Kenya iyo Itoobiya ayaa la filayaa inay ka qeyb galaan caleemo saarka Madaxweyne Xasan Sheekh oo mar kale xilkaasi loo doortay 16 may 2022.
“Waxaan maanta wafdi horudhac ah oo ka socda waddanka aan walaalaha nahay ee Djibouti ku soo dhaweeynay magaalada Mugadishu, iyagoo kasoo hormaray Madaxweyne Ismail Omar Ghelle oo maalinta khamiista ka soo qaybgeli doono caleema saarka Madaxeyne Xassan Sheikh Maxamuud..” ayuu yiri xildhibaan C/risaaq Cumar oo ka mida xubnaha u dhow Madaxweyne Xasan Sheekh.
Previous articleDanjire Somali ah oo Fowdo ku tilmaamay howlaha ay Muqdisho ka wadaan Safiirada Carbeed iyo..
Next articleMaxkamadda Ciidamada oo Dil iyo Xabsi ku xukuntay qaar ka mida Askartii la geeyay Gobolka Gedo
Fanaanadii caanka ahayd ee Khadra Daahir oo ku geeriyootay Magaalada Hargeysa